Wax-qabadka Dawladda ee todobaadkii la soo dhaafay “Sawirro” | Baydhabo Online
Wax-qabadka Dawladda ee todobaadkii la soo dhaafay “Sawirro”
Wasiirka ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin; Dowladda Federaalka oo Gar-gaar Bani’aadanimo gaarsiisay Beledweyn, Horjeege Al-Shabaab ah “Dulyadeyn” oo la dilay, Ra’iisul Wasaare Ku xigeenka oo dhiirigeliyey Ardeyda u fariisatay Imtixaanaadka Guud, Hay’adda Nabadsugida ayaa dishay Madaxa Amniyaatka Al-Shabaab (Suheyb / Daauud), Ciidanka Dowladda oo burburiyey Saldhig Al-Shabaab ee Diinsoor, Gaari Hub & Walxaha Qarxa Saaran oo la qabtay.
Shirweyne Qaran ee Horumarinta Kalluumeysiga oo Muqdisho lagu qabtay, Mashaariic horumarineed oo laga fuliyey degmada Waajib, Maxkamada Ciidamada oo xukunno ku riday dambiilayaashii Qaraxii Diyaaradii Daallo, Dowladda Federaalka oo Daah-furtay Barnaamijka Tayeynta iyo Fursadaha Dhaqaalaha, Dowladda Turkiga oo soo gaarsiiyey Dowladda Federaalka 11kun tan oo mucaawano ah iyo Taliska Ciidanka Asluubta oo Carruur darbijiif ah u fidiyey Dhaqancelin Waxbarasho 6 bilood ah.
Dowladda Federaalka oo Gar-gaar Bani’aadanimo gaarsiisay Beledweyn
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Fedraalka Soomaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowaa iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa 1dii Juun 2016 gaaray magaalada baladweyne ee Gobolka Hiiraan oo ay gaarsiiyeen Deeq ay dowladda Federaalka ugu talagashay dadka ay saameeyeen fatahaada Wabiga Shabeele. Dowladda Federaalka ayaa in muddo ah waday dadaalo wax loogu qabanayo dadka u baahan gar-gaarka bani’aadanimo.
Horjeege Al-Shabaab ah “Dulyadeyn” oo la dilay
Saraakiisha Sirdoonka Qaranka Soomaaliya ayaa 1dii Juun 2016 xaqiijiyay Dilka Horjooge Maxamed Kuuno “Dulyadeen” oo ka tirsan Nabad diidka Al-Shabaab, kaas oo fiidkii 31ka Maajo 2016 lagu dilay duqeyn ka dhacday Deegaanka Buulo Gaduud oo qiyaastii 30km u jirta magaalada Kismaayo ee xarunta Jubaland. Horjoogahaan ayaa waxa uu ka mid ahaa horjoogayaal ka tirsan Nabad diidka Al-Shabaab oo horay Madaxooda la dul dhigay lacago aad u farabadan, waxa uuna Al-Shabaab mas’uul uga ahaa weerarada ururka Al-Shabaab ku qaadi jireen Dalka Kenya. Tallaabadaani lagu qaarijiyay horjooge Dulyadeyn ayaa waxa ay qeyb ka tahay dadaallada ay dowladda ugu jirto dabargoynta haraadiga Al-Shabaab ee ku dhuumaaleysanaya qaar ka mid ah gobollada Dalka.
Ra’iisul Wasaare Ku xigeenka oo dhiirigeliyey Ardeyda u fariisatay Imtixaanaadka Guud
Ra’iisul wasaare ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cumar Carte iyo mas’uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Waxbarashada waxa ay kormeereen Jaamacadda Ummadda oo ka mid ah goobaha lagu qaadayo Imtixaanka Shahaadiga ah ee sanad dugsiyeedka 2015-2016. Ra’iisul wasaare ku-xigeenka Xukuumadda Soomaaliya ayaa fasalada imtixaanku ka socdo booqday, isagoo u rajeeyey rajeeyay inay guuleystaan, kuna dadaalaan waxbarashada. Wasiiru-dowlaha Wasaaradda waxbarashada ee Xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Bile Nuur ayaa sheegay in Wasaaraddu sanadkii labaad ay qaadayso Imtixaanka Shahaadiga ah, waxaana uu intaa ku daray in ay ka bilaabatay guud ahaan koonfurta iyo bartamaha dalka. 19,112 arday (Sagaal iyo toban kun, boqol iyo toban iyo labo arday) ayaa 28kii May 2016 u fadhiisatay guud ahaan imtixaanka shahaadiga ah.
Hay’adda Nabadsugida ayaa dishay Madaxa Amniyaatka Al-Shabaab (Suheyb/ Daauud)
01 June 2016 Hay’adda Nabada sugida qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa xaqiijisay in ay dishay madaxii qaybaha Jabhadaha iyo Amniyaadka ee Al-shabaab, kaasi oo markii hore la baxay Suheyb balse magaciisa dhabta ah uu yahay Daauud, Howlgalkan oo ka dhacay Kuunyo Barow ayaa NISA xaqiijisay in ay fuliyeen iyaga iyo saaxiibadooda caalamiga ah. NISA waxa ay sheegtay in howlgalkaan oo ahaa mid gaar ah lagu dilay horjooge Suheyb oo magaciisa dhabta ah uu yahay Daauud, wuxuuna madax ka ahaa qaybaha Jabhadaha iyo Amniyaadka ee Al-shabaab.
Ciidanka Dowladda oo burburiyey Saldhig Al-Shabaab ee Diinsoor
Ciidamda Booliska Gaarka ah ee Dowlad Gobaleedka Koofur Galbeed Soomaaliya ayaa 2dii Juun 2016 burburiyay Saldhig deegaanka Misre ee degmada Diinsoor ay ku lahaayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab kadib markii ay ciidamada kala wareegeen maleeshiyaadkii ku sugnaa Saldhiggaasi. Wasiirka Hub kadhisgta iyo Dhaqan-celinta Dowlad Gobaleedka Koofur Galbeed Soomaaliya Mudane Xasan Xuseen Maxamed ayaa sheegay in ciidamada Booliska Gaarka ay weerar qorsheysan ku qaadeen deegaanka Misre, islamarkaana ay la wareegeen saldhig ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ka soo abaabuli jireen weerarada qorsheysan ee lagu dhibaateeyo shacabka Soomaaliyeed.
Gaari Hub & Walxaha Qarxa Saaran oo la qabtay
Ciidmada Hey’adda Sirdoonka iyo Nabad Sugidda Qaranka NISA ayaa 31kii May 2016 gacanta ku dhigay Gaari ay saaranyihiin hub iyo walxaha qarxa, kaas oo heyaddu sheegtay in la doonayay in lagu qalqalgaliyo Ammaanka Magaalada Muqdisho. Afhayeenka Wasaaradda Amniga C.kaamil Macalin Xirsi ayaa sheegay in ciidamada Hey’adda NISA ay ku qabteen gaari waday hab kadibna ay qaadeen howlgal kale oo laga sameeyay deegaanka Ceelasha Biyaha halkaas oo lagu soo qabqabtay ilaa 4 qof oo uu ku jiro horjoogihii hubka iyo qaraxyada gaariga ku soo raray.
Shirweyne Qaran ee Horumarinta Kalluumeysiga oo Muqdisho lagu qabtay
30kii May 2016 ayaa la soo gabogabeeyey Shirweyne Qaran oo looga hadlayey Horumarinta Kalluumeysiga ee dowladda Federaalka iyo Dowlad-Goboleedyada dalka ugana socday Muqdisho muddo sadex maalmood ah. Shirkan ayaa looga hadlay horumarinta kalluumeysiga iyo dhismaha hey’adda ay ku mideysanyihiin Kalluumeysatada & Kheyraadka Badda. Wasiirka Wasaaradda Kalluumeysiga & Kheyraadka Badda Maxamed Cumar Caymooy ayaa sheegay in bulshada Soomaaliyeed ay fahamtay faa’iidada kaluunka ayna wasaaraddu ka shaqeyn doonto horumarinta kalluumeysatada.
Mashaariic horumarineed oo laga fuliyey degmada Waajib
Mashaariic hormarmarineed oo Dawlada UK ay ka fulisay degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa 30kii May 2016 xarigga laga jaray. Degmada Waajid ayaa aheyd mid ay go’doomiyeen maleeshiyaadka Al-Shabaab in muddo ah, taas oo saameynweyn kuyeelatay bulshada ku nool Waajid. Degmada Waajid oo ilaa iyo 90 KM dhinaca bari uga beegan Xaruunta Gobolka Bakool ee Xudur waxaa si aad ah u saameeyey go’odoonka wadooyinka soo gala taas oo sababtay in Degmada ay ka barakacaan dadkii degenaa. Dawlada UK oo u soo wakiilatay Qaar ka mid ah hay’adaha Qaramada Midoobey ayaa waxaa ay ka hirgalisay Dhismooyin iskugu jira Suuq weeyn oo lagu iibiyo Hilibka Xoolaha iyo Qudaarta. Xarunta adeegga Garsoorka, Ceel Biyoodyo ladayactiray iyo beero aad u qurxbadan oo bulshada lagu dereensiinaayo Kheyraadka Dhulkooda Hooyo
Maxkamada Ciidamada oo xukunno ku riday dambiilayaashii Qaraxii Diyaaradii Daallo
Maxkamada darajada koowaad ee Ciidanka Qalabka-Sida ee Soomaaliya ayaa 30kii May 2016 xukuno kala duwan ku riday dadkii loo heystay in ay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday diyaaradda Daallo labadii bishii Fibraayo ee sanadkan. Guddoomiyaha Maxkamadda Darajada koowaad ee Ciidanka Qalabka-Sida ee Soomaaliya, Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute, oo ku dhawaaqay xukunka maxkamadda ayaa sheegay in C/wali Maxamuud Macow iyo Careys Xaashi Cabdi oo maqane ah ay ku riday xukun xabsi daa’im ah. C/wali Maxamuud Macow oo ahaa madaxii amniga ee hey’adda duulista iyo saadasha hawada ee garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde, uu mas’uulka ahaa diyaarintii laptopkii lagu qarxiyay diyaarada Daallo sida lagu sheegay go’aanka maxkamadda ay maanta gaartay. Sidoo kale, Abshir Maxamed Macalin Axmed, Safiyo C/laahi Xasan Cali waxaa ay ku xukuntay afar sano oo xabsi ciidan ah, halka Liibaan Maxamed Yalaxow, Cumar Muxudiin Xuseen (Qoorey) iyo Maxamed Cabdi Cilmi ay ku riday xukun ah min hal sano oo xabsi ciidan ah. Maxkamadda ayaa sidoo kale waxaa ay xukun min lix bilood oo xabsi ciidan ah ku riday dadka kala ah; Bashiir C/laahi Afrax, Cali Nuur Salaad Diiriye iyo Aadan Daahir Diiriye. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida, sidoo kale waxaa ay fasaxday shan oo lagu wayay wax dambi ah, wxayna kala yihiin; Cumar Macalin Calasow, Cali Maxamuud C/raxmaan, C/laahi C/qaadir Abuukar, Ismaaciil Maxamed Xirse iyo Faarax Khaliif Cali Maxamed.
Dowladda Federaalka oo Daah-furtay Barnaamijka Tayeynta iyo Fursadaha Dhaqaalaha
Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Aden Ibraahim Ferkeeti ayaa 29kii May 2016 daah-furay Barnaamijka Tiir dhexaadka u ah Tayeeynta iyo Fursadaha Hay’adaha Dhaqaalaha oo afka qalaad lagu yiraahdo Somali Core Economic Institutions and Opportunities Project (SCORE). Mashruucaan waxaa maalgalinaya Bangiga Aduunka, wuxuuna si toos ah ula shaqaynayaa Wasaaradaha Ganacsiga, Dekedaha iyo Bangiga Dhexe kuwaas oo xiriir fiican la leh shirkadaha gaarka loo leeyahay (Private Sector). Mashruucaan daah furkiisa waxaa ka soo qayb galay Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha, Wasiirka Dekedaha ee XFS iyo Wasiirka Maaliyadda dowlad goboleedka Puntland, wuxuuna socon doono mudo sadex sano ah, iyadoo uu ku kici doono aduun gaaraya 30 milyan oo doolar, waxaana si gaar ah loogu hormarinayaa shirkadaha gaarka loo leeyahay, wuxuuna gacan ka gaysan doonaa sidii loo abuuri lahaa jawi suura galin kara in shaqo loo abuuro dhalinyarada iyo haweenka. Wasiir Farkeeti ayaa sheegay in diirada lagu saarayo Mashruucaan tayeeynta dhanka shuruucda iyo kor u qaadida awooda Wasaaradaha xiriika la leh Ganacsatada.
Dowladda Turkiga oo soo gaarsiiyey Dowladda Federaalka 11kun tan oo mucaawano ah
29kii May 2016 ayaa Markab siday 11-kun oo tan oo cunto ah ayaa soo gaaray Dekedda Muqdisho, kaas oo ka yimid dowlada iyo shacabka Turkiga, waxaana loogu talo galay dadka Soomaaliyeed ee qaarkood ay abaaruhu saameeyeen. Wasaarada Arrimaha Gudaha Soomaaliya ayaa gargaarkan kala wareegtay mas’uuliyiin ka socday dowladda Turkiga iyo hey’ada Bisha Cas e dalka Turkiga oo uu horkacayey safiirka dowlada Turkiga ee Soomaaliya. Danjire Olgan Baker safiirka dowlada Turkiga u fadhiya Soomaaliya ayaa sheegay in gargaarkan ay ugu talo galeen shacabka Soomaaliyeed, lana gaarsiinayo dadka mudan. Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Soomaaliya mudane C/rashiid Maxamed Xidig ayaa sheegay in dowladu si siman gargaarkan ay ugu qeybin doonto dadka Soomaaliyeed, isagoo u mahad celiyey dowlada iyo shacabka dalka Turkiga.
Taliska Ciidanka Asluubta oo Carruur darbijiif ah u fidiyey Dhaqancelin Waxbarasho 6 bilood ah
Taliska Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed ayaa 28kii May 2016 shahaadooyin guddoonsiiyey 18 ka mid ah caruurta Darbijiifka ah ee ku dayacnaa waddooyinka magaalada Muqdisho, kuwaasi oo Xabsiga dhexe ku qaatay 6 Bilood oo Dhaqan celin iyo Waxbarasho ah. Sareeya Gaas Bashiir Maxamed Jaamac Taliyaha Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed ayaa sheegay in Caruurtan Koorsada dhameystay loo qeybin Doonno ilaa iyo Saddex Qeybood oo kala ah :-
1 –Wixii ka weyn da’da 18 sano in loo Qaadan doonno Askari Ciidanka Asluubta ah, iyadoo la eegayo Ogolaansho
2- in qeyb ka mid ah Caruurtaasi la siin doonno Waxbarasho Diini iyo mid maaddi ah islamarkaana la bari doonno farsamada Gacanta.
3- qeybta soo hartay oo la siin doonno Lacago guno ah islamarkaana ay dib ula midoobi doonaan Qoysaskooda.
Taliyaha Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed Gen. Bashiir Maxamed Jaamac ayaa sidoo kale sheegay in Ciidanka Asluubta uu dar dar galin doonno Dhaqan celinta loo sameynayo Caruurta Darbi jiifka ah oo ay dhawaan bilaabayaan Howgallo lagu soo Aruurinaayo Ciyaalka koola dhuuqa ah ee Magaalada ku dayacan.